Xildhibaanno Loo Dhaariyay Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya – Goobjoog News
Xildhibaanno Loo Dhaariyay Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya
Aqalka Sare ee baarlamaanka Federaalka Soomaaliya oo maanta kulan uga socdo xaruntooda magaalada Muqdisho ayaa halkaa lagu dhaariyay 3 xubnood oo si rasmi ah uga mid noqday Golaha.
Kulankan oo ahaa kalfadhiggii 1 kulankiisii 4-aad ayaa waxaa shir guddoominayay guddoomiyha ku meel gaarka h ee Maxamed Xuseen Raage, waxaana ka soo qeybgalay 42 xildhibaan oo ay ku jiraan kuwii maanta la dhaariyay.
Ajandaha xubnaha horyaalla waxaa ugu muhiimsanaa , khudbad jeedinta xildhibaannada u sharraxan guddoonka, kahor inta aan khudbad jeedinta la gelin ayaa waxaa halkaa lagu dhaariyay saddex xubnood oo si rasmi ah uga mid noqday Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya.
Saddexda Xildhibaan ee La Dhaariyay
Ayuub Ismaaciil Yusuf
Deeqo Xasan Xuneen
Si kastaba, waxaa hadda wali socda khudbadaha musharrixiinta guddoonka Aqalka Sare ee baarlmaanka oo isla maantaba la soo gabagabeynayo.
Wixii ka soo kordha kala soco, Goobjoog News.
DFS Oo Diiwaangelinta Kala Noqotay Maraakiibta Iyo Doonyaha Wata Calanka Soomaaliya
Maamulka B/weyne Oo Ammar Kasoo Saaray Dhulalka La Kala Iibsado
Sargaal Sare oo Ka Tirsan Ciidamada Jubba oo Qarax Lagu Diley
Yusuf Garaad: Cabdulqawi Waxaa Uu Ku Guuleystay Galaangal Ay Sameysay Dowladda Federaalka ah